शालिग्राम बचत सहकारीको सातौं साधारण सभा सम्पन्न ! – ebaglung.com
शालिग्राम बचत सहकारीको सातौं साधारण सभा सम्पन्न !
२०७५ पुष ७, शनिबार २०:४२	Top News, अन्य समाचार
बागलुङ २०७५ पुस ७ । बागलुङ नगरपालिका–१३ पैयुँपाटा बास्कोटमा रहेको शालिग्राम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सातौं बर्षिक साधारण सभा शनिबार सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाको उदघाट्न गर्दै बागलुङ नगरपालिका–१३ का कार्यबहाक वडा अध्यक्ष एकनाथ रेग्मीले सहकारीे हरेक वर्ग र समुदायको सहयात्री बनेको बताएका छन ।
उनले सहकारीले गरिब तथा विपन्न घरपरिवारमा पनि समृद्धि ल्याएको बताए । कार्यक्रममा वडा सदस्य भवानी प्रसाद रिजाल नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेस गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष एवं संस्थाका सल्लाहकार रामप्रसाद अधिकारी, जनमत माविका प्रध्यानध्यापक परशुराम रिजाल, पैयुँपाटा स्वास्थ्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नरप्रसाद रिजाल, पञ्चायन बचत तथा ऋण सहकारीका पुर्व प्रवन्धक हेमचन्द्र रेग्मी, संस्थाका संल्लाहकारहरु चन्द्र बहादुर खत्री, यज्ञप्रसाद रिजाल, शेयर सदस्य धनराज रिजाल, लेखासमिति संयोजक लिलाधर रिजाल ऋण सिफारिस उपसमिति संयोजक नारायण दत्त पौडेल, लगायतले बोलेका थिए ।
साधारण सभाले संस्थाका सचिव सागर रिजालले प्रस्तुत गरेको प्रगति प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष रामप्रसाद रिजालको प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो । कुल १८ लाख ६८ हजार ४ सय शेयर पूजीं रहेको सहकारीमा १ सय ७९ जना शेयर सदस्य रहेका छन ।
संस्थाले आर्थिक वर्ष ०७४।०७५ संस्थामा असल कारोबार गर्ने शेयर सदस्यलाई सम्मान गरेको थियो । जसमा असल ऋणी तर्फ पार्वती बस्नेत, उत्कृष्ट बचत कर्ता तर्फ लिलावती पाध्या र जेष्ठ नागरिक शेयर सदस्य तर्फ डिल्ली प्रसाद पौडेललाई सम्मान गरेको थियो । २०६८ सालमा स्थापना भएको संस्थाले साधारण सभाकै अवसरमा एसईई परिक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल शेयर सदस्यका छोरा छोरीलाई बधाई सहित सम्मान गरेको थियो । जसमध्ये शेयर सदस्य सागर रिजालको छोरी, गिता रिजाल र शेयर सदस्य ठाकुर पौडेलको छोरा सुजन पौडेललाई सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष दयाराम रिजालको अध्यक्षता, कार्यसमिति सदस्य बलराम रिजालको स्वागत र सचिव सागर रिजालको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।